Ulingchịkwa n'okwu ihu igwe megide Shell | Law & More B.V.
blog » Ikpe na ikpe ihu igwe megide Shell
Ikpe na ikpe ihu igwe megide Shell
Mkpebi nke Courtlọikpe District nke Hague n'okwu ikpe nke Milieudefensie megide Royal Dutch Shell PLC (nke a mechara: 'RDS') bụ ihe dị mkpa na ịgba akwụkwọ gbasara ihu igwe. Maka Netherlands, nke a bụ nzọụkwụ na-esote mgbe nkwenye siri ike nke mkpebi ikpe nke Urgenda nke Courtlọikpe Kasị Elu, ebe e nyere iwu ka steeti belata nhapu ya na ebumnuche nke nkwekọrịta Paris. Maka oge mbụ, ụlọ ọrụ dị ka RDS ugbu a kwesịrị ime ihe iji gbochie mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ. Isiokwu a ga-akọwapụta ihe ndị bụ isi na nsonaazụ nke mkpebi a.
Nke mbu, nnabata nke nkwuputa ahu di nkpa. Tupu ụlọ ikpe enwee ike ịbanye na njirimara nke ihe gbasara obodo, ihe a na-ekwu ga-ekwenye. Courtlọ ikpe ahụ kpebiri na ọ bụ naanị omume mkpokọta na-egbo mkpa nke ọgbọ dị ugbu a na ọdịnihu nke ụmụ amaala Dutch. Omume ndị a, megidere omume nke na-egbo mkpa nke ọnụ ọgụgụ ụwa, nwere mmasị yiri nke a zuru oke. Nke a bụ n'ihi na nsonaazụ nke ụmụ amaala Dutch ga-enweta site na mgbanwe ihu igwe dị iche na nke pere mpe karịa nke ndị bi n'ụwa n'ozuzu ya. ActionAid anaghị egosipụta oke mkpa nke ndị bi na Dutch na ebumnuche ya zuru ụwa ọnụ. Ya mere, ekwuputara nkwupụta ya na ekwereghị. A kwupụtakwara ndị gbara akwụkwọ n'otu n'otu na nkwenye ha ekwenyeghị na nkwupụta ha, n'ihi na ha egosighi mmasị onwe onye zuru oke iji nabata ya na mgbakwunye na mkpokọta mkpokọta.
Ugbu a na ekwuputala na ekwesịrị ikwupụta ụfọdụ ebubo a gbara akwụkwọ, ụlọ ikpe ahụ nwere ike ịtụle ha nke ọma. Iji kwe ka nkwuputa nke Milieudefensie na RDS nwere iwu iji nweta nbelata nsị nke 45%, thelọ ikpe ahụ ga-ekpebi na ọrụ dị otú ahụ dị na RDS. A ghaghị iji nlezianya tụlee nke a dabere n'usoro nlekọta ọrụ a na-edeghị ede. 6: 162 DCC, nke ọnọdụ niile nke ikpe ahụ. Ọnọdụ thelọikpe ahụ lebara anya gụnyere ihe ndị a. RDS guzobere amụma otu maka otu Shell niile nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme n'ime ya. Ndị otu Shell, ya na ndị na-ebunye ya ahịa na ndị ahịa ya, na-ahụ maka anwuru anwuru CO2, bụ nke karịrị nke anwuru nke ọtụtụ steeti, gụnyere Netherlands. Ihe anwuru anwụ ndị a na - ebute mgbanwe ihu igwe, nke ndị bi na Dutch na - eche maka ya (dịka ịma ahụ ike ha, kamakwa dịka ihe egwu anụ ahụ n'ihi na, ihe ndị ọzọ, ịrị elu oke osimiri).
Ikike ruru mmadu
Ihe ndị na-esi na mgbanwe ihu igwe nke ụmụ amaala Dutch nwere, n'etiti ndị ọzọ, na-emetụta ikike ha ruuru mmadụ, ọkachasị ikike ndụ na ikike obibi ndụ enweghị nsogbu. Agbanyeghị na ikike ụmụ mmadụ nwere n'ọrụ dị n'etiti ụmụ amaala na gọọmentị, yabụ na enweghị ọrụ ọ bụla maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ga-asọpụrụ ikike ndị a. Nke a metụtakwara ma ọ bụrụ na steeti ekwesighi ikpuchido mmebi iwu. A na-etinyekwa ikike mmadụ nke ụlọ ọrụ kwesịrị ịkwanyere ùgwù iwu dị nro ngwá dị ka Gukpụrụ UN na-eduzi na azụmahịa na oke ruru mmadu, nke RDS kwadoro, na OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Ihe ọmụma ndị a na-enwekarị site na ngwá ndị a na-enye aka na nkọwa nke usoro nlekọta a na-edeghị ede na-adabere na nke a ga-ewere ọrụ maka RDS, dị ka ụlọ ikpe ahụ si kwuo.
Ọrụ nke ụlọ ọrụ ịkwanyere ikike ụmụ mmadụ ùgwù na-adabere n'ịdị njọ nke mmetụta nke ọrụ ha na ikike ụmụ mmadụ. Lọ ikpe ahụ chere nke a n'okwu nke RDS na-adabere na eziokwu ndị akọwapụtara n'elu. Ọzọkwa, tupu ewere ọrụ dị otú ahụ, ọ dịkwa mkpa na ụlọ ọrụ nwere ohere na mmetụta zuru oke iji gbochie mmebi ahụ. Thelọ ikpe ahụ chere na nke a bụ ikpe n'ihi na ụlọ ọrụ nwere mmetụta n'ime ha niile yinye uru: ma n'ime ụlọ ọrụ / otu n'onwe ya site na nguzobe nke iwu yana ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa site na ịnye ngwaahịa na ọrụ. Ebe ọ bụ na mmetụta dị ukwuu n'ime ụlọ ọrụ n'onwe ya, RDS dị n'okpuru ibu ọrụ iji nweta nsonaazụ. RDS ga-agba mbọ maka ndị na-ebubata ya na ndị ahịa ya.
Courtlọ ikpe tụlere oke ọrụ a dị ka ndị a. Dabere na Nkwekọrịta Paris na IPCC na-akọ, ụkpụrụ a nabatara maka okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ nke kachasị ogo 1.5 Celsius. Mbelata a rịọrọ nke 45%, yana 2019 dị ka 0, dị ka ụlọ ikpe zuru oke n'usoro ụzọ mbelata dị ka IPCC chọrọ. Yabụ, enwere ike ịnabata nke a dị ka ọrụ mbelata. Courtlọ ikpe nwere ike itinye ọrụ dị otú a ma ọ bụrụ na RDS ada ada ma ọ bụ yie ka ọ daa n'ọrụ a. Thelọ ikpe ahụ gosipụtara na nke a bụ ikpe, ebe ọ bụ na iwu otu ahụ ezughi ezu iji wepụ ụdị iyi egwu ahụ.
Mkpebi na ihe nchebe
Ya mere, ụlọ ikpe ahụ nyere RDS na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'ime otu Shell iwu ka ha belata ma ọ bụ mee ka ọnụọgụ kwa afọ nke ikuku CO2 dị na mbara igwe (Scope 1, 2 na 3) metụtara ọrụ azụmaahịa Shell ma ree ike- na-ebu ngwaahịa n'ụzọ dị ka na njedebe nke afọ 2030 olu a ga-ebelata ma ọ dịkarịa ala ụgbụ 45% ma e jiri ya tụnyere ọkwa nke afọ 2019. Ihe nchekwa RDS ezughi oke iji gbochie iwu a. Iji maa atụ, ụlọ ikpe tụlere arụmụka nke ngbanwe zuru oke, nke na-egosi na onye ọzọ ga-eweghara ọrụ nke Shell ma ọ bụrụ na etinyere ọrụ mbelata, ezughi oke. Tụkwasị na nke ahụ, eziokwu ahụ bụ na RDS abụghị naanị ihe kpatara mgbanwe ihu igwe adịghị egbochi RDS site na nnukwu ọrụ nke mgbalị na ọrụ na-egbochi ikpo ọkụ ụwa nke ụlọ ikpe ahụ chere.
Nke a na-emekwa ka o doo anya ihe nsonaazụ nke mkpebi a bụ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha na-ahụ maka oke anwuru (dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ mmanụ na gas ndị ọzọ), enwere ike ịkpọrọ ha n'ụlọ ikpe ma maa ha ikpe ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ emeghị mgbalị zuru oke site na iwu ya iji belata mmachi ndị a. Nke a liability n'ihe ize ndụ na-akpọ maka ihe stringent emission Mbelata iwu nile yinye uru, ya bụ maka ụlọ ọrụ na otu ya yana ndị ahịa ya na ndị na-ebubata ya. Maka iwu a, enwere ike belata mbelata yiri nke mbenata RDS.
Mkpebi akara ngosi nke ikpe ihu igwe Milieudefensie megide RDS nwere nsonaazụ dị ukwuu, ọ bụghị naanị maka Shell Group kamakwa maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye onyinye dị ukwuu na mgbanwe ihu igwe. Ka o sina dị, a pụrụ igosi na nsonaazụ ndị a ziri ezi site na mkpa dị ngwa iji gbochie mgbanwe ihu igwe dị egwu. Have nwere ajụjụ ọ bụla gbasara mkpebi a na ihe ọ ga-esi na ụlọ ọrụ gị pụta? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọkàiwu anyị bụ ọkachamara na iwu gbasara iwu obodo ma nwee obi ụtọ inyere gị aka.
Previous Post Nye onyinye: Gịnị dị mkpa ka ị mara?
Next Post Tinye akwụkwọ mkpesa gbasara ụlọ ikpe